Maxay tahay sababta cilmi baarayaasha Afrika ay ugu biirayaan Accelerator Science Science - AfricArXiv
Published by Adeyemi Adetula & Patrick S. Forscher on 13th March 2020 13th March 2020
Hadafyada AfricanArXiv waxaa ka mid ah kobcinta bulshada ka dhexeysa cilmi baarayaal Afrikaan ah, fududeynta wadashaqeynta ka dhexeysa baarayaal Afrikaan ah iyo kuwa aan Afrikaan ahayn, iyo sare u qaadista astaanta baarista Afrikaanka ee heerka caalamiga ah. Yoolalkaas waxay la jaan qaadayaan yoolalka hay'ad kale, ee Dardar-gelinta cilmu-nafsiga (PSA). Qoraalkani wuxuu sharxayaa sida ay hadafyadan ula jaan qaadayaan uguna doodayaan ku biiritaanka Dhakhtarka Sahanka cilmu-nafsiga inuu ka faa'iideysan doono xubnaha cilmi baarista AfrikaArXiv iyadoo loo marayo iskaashi iyo helitaan kheyraad.
Waa maxay Dardar-gelinta Cilmiga Maskaxda?
PSA waa shabakad mutadawacnimo ah, oo caalami ah, shabakad dimoqraadi ah ka badan 500 sheybaar oo ka socda in ka badan 70 dal dhammaan lixda qaaradood ee dadku ku badan yihiin, oo ay ku jiraan Afrika. Daraasadaha cilmu-nafsiga waxaa caadiyan gacanta ku hayey cilmi-baarayaasha reer Galbeedka ee bartay kaqeybgalayaasha reer Galbeedka (Rad, Martingano, & Ginges, 2018). Mid ka mid ah yoolalka aasaasiga ah ee PSA waa in laga caawiyo wax ka qabashada dhibaatadan iyada oo la ballaarinayo baaxadda cilmi-baarayaashu iyo kaqeybgalayaasha cilmi-nafsiyeedka, taas oo ka dhigeysa cilmi-nafsi more wakiil ka ah aadanaha.
Hadafkani wuxuu la jaan qaadayaa himilooyinka AfricanArXiv: wax ka qabashada la'aanta cilmi-baareyaasha cilmi-nafsiga ee aan reer-galbeedka ahayn waxay ka kooban tahay kor u qaadista sumcadda baarayaal cilmi-nafsi ee Afrikaanka iyo xoojinta iskaashiga ka dhexeeya cilmi-baareyaasha Afrika iyo kuwa aan Afrikaanka ahayn. Intaas waxaa sii dheer, PSA gaar ahaan waxay daneyneysaa inay ballaariso shabakadeeda ka jirta Afrika: in kasta oo PSA ay jeceshahay inay ku kasbato matalaad dhammaan qaaradaha, marka ugu dambeysa oo keliya la tiriyey 1% 500 oo sheybaar ayaa ka yimid Afrika.
Sida PSA ay uga faa iidaysan karto bulshada cilmi baarista ee Afrika
Hadafka la wadaago ee PSA iyo AfricanArXiv waa sidaas si loogu guuleysto / loo qoro koox cilmi baarayaal Afrikaan ah si ay ugu biiraan PSA iyo barnaamijyadeeda ku aadan cilmi baarista caalamiga ah ee sayniska cilmi nafsiga. Waxaa naga go'an in aan ballaarino astaanta xubnaha cilmi baarista Afrika.
Baaraha kasta oo cilmi-nafsi yaqaan ah wuxuu PSA ugu biiri karaa lacag la'aan. Shaybaarrada xubnuhu waxay heli doonaan fursad ay gacan uga geystaan ​​maamulka PSA, u soo gudbiyaan daraasado ay ku marsiinayaan shebekadda PSA ee shaybaarka, iyo iskaashi iyo helitaan qoraaleed oo ku saabsan mashruucyo boqolaal baarayaal ah oo ka socda adduunka oo idil. Mashaariicda PSA aad ayey u ballaaran yihiin; Daraasaddii ugu horreysay ee caalami ah oo mareysa shabakadeeda (Jones iyo al., 2020) waxaa ku lug lahaa in kabadan 100 shaybaar oo ka kala socda 41 dal, kuwaas oo si wada jir ah u shaqaaleysiiyay in kabadan 11,000 kaqeybgale.
Hay'adda PSA waxay soo saartaa tiro badan oo ah isgaadhsiinta cilmi-baarista, taas oo dhammaantood noqon karta wadaagis la'aan iyada oo loo marayo AfricArXiv. Xogta macluumaadka PSA ee ku lug leh kaqeybgaleyaasha Afrika waa lacag la'aan si loo falanqeeyo. Xusuus-qoryadan waxaa lagu falanqayn karaa iyada oo si gaar ah diiradda loo saarayo Afrikaanka, cilmi-baaraha natiijada ka dhashaana dib ayaa loogula wadaagi karaa AfrikaArXiv.
Faa'iidooyinka gaarka ah ee xubinnimada PSA
Tallaabada ugu horreysa ee lagu helo waxtarka PSA waa in xubin noqo adoo muujinaya balan qaadka mabda'a ah ee ku biirinta PSA hal siyaabo ama mid kale. Xubinnimada waa lacag la'aan.
Markaad xubin xubin ka noqoto, waxaad fursad u heleysaa shanta waxtar ee soo socda:
Soo gudbinta bilaashka ah ee la soo jeedinta si loo socodsiiyo mashruuc ballaaran, oo waddaniyad badan leh. Hay'adda PSA waxay aqbashaa soo jeedinta ku saabsan daraasadaha cusub ee lagu maamuli doono shabakaddeeda sanad walba inta u dhexeysa bilaha Juun iyo Agoosto (waad arki kartaa wicitaankeena sannadka 2019 halkan). Adiguba waad soo gudbin kartaa soojeedin. Haddii soojeedintaada la aqbalo inta lagu gudajiro geedi socodka dib u eegista asaagayaga, PSA waxay kaa caawin doontaa inaad shaqaaleysiiso shaqaalayaal ka shaqeeya shabakadeeda caalamiga ah ee 500 sheybaar oo aad ku siiso taageero dhinacyada dhan ee dhameystirka daraasad ballaaran oo bogag badan leh. Waad awoodaa markaa Gudbi wax soo saar kasta oo cilmi-baaris ah oo ka dhasha geeddi-socodkan oo lacag la’aan ah sida ku daabacan AfricanArXiv.
Ku soo biir mashaariicda PSA. Hayada PSA ayaa hada wada lix mashruuc oo labo shaybaar ah, mid ka mid ah si firfircoon u shaqaaleysiiya iskaashatada. Labada toddobaad ee soo socda, PSA waxay aqbali doontaa mowjad cusub oo waxbarasho ah. Wadashaqeynta mid ka mid ah daraasadahayaga, waad soo aruurin kartaa xog ama waxaad ka caawin kartaa falanqaynta tirakoobka, maareynta mashruuca, ama maareynta xogta. Haddii aad ku biirto mashruuc ahaan iskaashi, waxaad ku kasban doontaa qoraalo ku saabsan waraaqaha ka imanaya mashruuca (taasi way noqon kartaa si xor ah ayey u wadaagaan AfricaArXiv). Waad ka aqrin kartaa wax ku saabsan daraasadaha ay PSA hadda ka shaqeyneyso halkan.
Ka mid noqo guddiga tifaftirka ee PSA. Hay'adda PSA waxay sanad kasta u dirtaa wicitaano loogu talagalay soo gudbinta cusub ee daraasadda. Sida wakaaladaha deeqda bixiya iyo joornaalada, waxay u baahan tahay in dadku inay u adeegaan sidii dib u eegis loogu sameeyo soo gudbinta daraasadan. Waxaad muujin kartaa xiisaha inaad u adeegto dib u eegis markii aad xubin ka noqoto PSA. Dhanka kale, waxaa laguugu qori doonaa inaad xubin ka tahay guddiga tifaftirka PSA. Waxaad ku dari kartaa xubinnimada guddiga tifaftirka boggaaga iyo CV-gaaga.
Ku biir mid ka mid guddiyada maamulka PSA. Nidaamyada iyo habraacyada PSA waxaa loo soo saaray qaabab kala duwan gudiyo. Fursado ayaa si joogto ah u soo baxa si ay ugu biiraan guddiyadan. Ku shaqeynta gudiyada waxay gacan ka geysaneysaa qaabeynta jihada PSA waxeyna kusameyneysaa cilmi baarayaashu iney lashaqeeyaan iskaashatooyinka imaan kara aduunka oo dhan. Haddii aad xiisaynayso ka mid noqoshada guddi, ku soo biir Wargayska PSA iyo Goobaha shaqo ee PSA Slack. Waxaan sameyneynaa ogeysiisyo fursado cusub oo aan ugu biirinayno guddiyadeena xarumahaas.
Compensation Qaado magdhow si aad u dhumiso kharashaadka wadashaqeynta Waxaan ognahay in iskaashiga caalamiga ahi uu noqon karo mid adag oo qaali ah, gaar ahaan cilmi baadheyaasha xarumaha dakhligoodu hooseeyo. Hay'adda PSA waxay haddaba siineysaa ilo dhaqaale si ay u fududeyso wadashaqeynta. Waqtiga xaadirka ah, waxaan heysanaa barkad yar oo ah deeqda shaybaarka xubinka, deeqo yar oo ah $ 400 Doollar oo gacan ka geysanaya hakinta kharashaadka kaqeybgalka mashruuca baaritaanka PSA. Waad dalban kartaa xubin deeq bixin ah halkan.
PSA waxay higsaneysaa in ay kobciso wadashaqeynta mashruucyadeena waaweyn, kuwa qaran iyo kuwa badan. Waxaan aaminsanahay wadashaqeyntaani inay u keeni karaan faa iidooyin baarayaal Afrikaan ah. Haddii aad ogolaato, waad awoodaa ku soo biir shabakadayada si loo helo bulsho firfircoon oo caalami ah oo ka badan 750 baarayaal oo ka socda 548 sheybaar in ka badan 70 waddan. Waxaan sugeynaa inaan kula shaqeyno.
Ku saabsan qorayaasha
Asal ahaan wuxuu ka yimid Nigeria, Adeyemi Adetula waa arday PhD leh Shaybaarka CO-RE Jaamacadda Université Grenoble Alpes iyo xubin ka tirsan Dardar-gelinta cilmu-nafsiga. Ade wuxuu daraasad ku sameynayaa in natiijooyinka cilmi-nafsiyeed ay ka dhasheen guud ahaan waddanka, gaar ahaan waddamada Afrika. Danaha uu ka leeyahay cilmi baarista waxaa ka mid ah soo-celinta, cilmi-nafsi bulsheed iyo tijaabooyin, cilmi-nafsi dhaqameed-isku-gudub ah, tallaabooyin tira-koob ee cilmu-nafsiga, iyo cilmu-nafsiga saxda ah iyo sixitaanka. Waxaad kula xiriiri kartaa at adeyemiadetula1@gmail.com
Patrick S. Forscher waa saynisyahan cilmi baaris ku leh Shaybaarka CO-RE at Université Grenoble Alpes oo baranaya sida loo joogteeyo iskaashi ballaaran oo cilmi nafsi ah. Sidoo kale waa kaaliyaha agaasimaha xog-hayaha Accelerator Science-ka. Patrick wuxuu mas'uul ka yahay hawlo fara badan oo ka socda PSA, oo ay ka mid yihiin horumarinta iyo hirgelinta siyaasadaha PSA iyo maalgelinta dadaallada. Danaha uu ka leeyahay cilmi baarista waxaa ka mid ah cilmi baaris la dabaqay, tijaabooyin duleed, falanqayn meta, dib u eegis asaaga ah, iyo dhibcaha baarista. Waxaad kula xiriiri kartaa at schnarrd@gmail.com
Categories:	iskaashiFuran FuranDib-u-eegidda AraggaIsgaarsiinta SayniskaSubmission
Tags: -saxaafadeedDardar-gelinta cilmu-nafsiga